शिक्षक बन्न जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा ! - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षक बन्न जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा !
जाजरकोट, भदौ १७ । जाजरकोटमा एक जना जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर शिक्षक बनेकी छन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी जुनिचाँदे गाउँपालिका-६ की गरिमा शाहीले पदबाट राजीनामा दिएर शिक्षक बनेकी हुन् ।
शाही तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट वडा सदस्य भई जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यसमेत निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी छेडागाड नगरपालिका-७ को भानुभक्त आधारभूत विद्यालयको शिक्षकक बनेकी हुन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिबाट राजीनामा दिई जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले लिएको परीक्षामा सामेल भएकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुस जाजरकोट ’क’ मा माओवादीका खगेन्द्रसेन विजयी
कक्षा ६ देखि ८ सम्मको गणित विषयको शिक्षण सिकाइ अनुदान दरबन्दीमा उनी शिक्षक भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकार्इ जाजरकोटका प्रमुख सुधिनराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । बुढाथोकीका अनुसार शाहीले पदबाट राजीनामा दिएकाले शिक्षण पेशामा लाग्न पाउने अधिकार भएकाले परीक्षामा उत्तीर्ण भई सिफारिश गरिएको हो । -रासस
याे पनि पढ्नुस एकै जिल्लामा चौध सय बालबालिका विभिन्न जोखिममा !
ट्याग्स: Garima shahi, jajarkot